Hluttaw Cungdot Thimning Remh Ding Biatung Ka Chuahpi: By Salai Ceu Bik Thawng – Chuncha News
Hluttaw Cungdot Thimning Remh Ding Biatung Ka Chuahpi: By Salai Ceu Bik Thawng
NLD nih tutan an term chungah Phunghrampi remh khawhnak ding lam cuapit cang. Cucaahataangmi thla 8 chungah NLD nih Phunghrampi remh hau loin Parliament ahatuah khawhmi “ngeihciami upadi (existing laws) pawl remh/hrawh/chap” nakding tukha aa hmaithlakahau. Phunghrampi remh haulo in NLD nih tlangcungmi kan caahatuah khawhmi,aherh tukmi phun 11 zong ka rak tial bal cang khah. Adang zongatampi ko.
Cu lakah, Amyotha Hluttaw timi Cungdot Innpi (Senate or Upper House) thimnak constituency timi me-rikulh (me-sandah-ne) remh ding le thimning phung (electoral system) thlen dingin biatung ka chuahpi i tuanvo neitu Union Election Commission sin zongah ka kuat hna.
Adang—Phunghrampi remh haulo in NLD cozah nih aa zalh ahcun fawite inatuah khawhmi tlangcungmi kan herhmi-
#Leicung/tang kokek thilchuak thenphawtning, #Nuhrin holh in cacawnnak (Mizoram bantuk), #Ramthen ramri tah than ding,
#Vawlei hmun kong,
#FPIC timi mah hmunhma ah mah nih biakhiahnak nawl,
#Zung/sianginn uniform kong tibantuk …ka si khawh tawk in ka tialmi pawl cozah sinah ka kuat dih hna lai.
Kannih te hna bia cu an ngai duh hnga maw, thei ve hlah. Asinain,achimrel kan rian.
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်မှုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်
လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းအတွင်း၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးNLDပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိက၀တ်သည် ရေစုန်မျှောသွားပြီ။သို့သော်အနိုင်ရပါတီအနေဖြင့်လွှတ်တော်အတွင်းသာမန်/ပြဌာန်းဥပဒေများအသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းကိုလက်ထဲမှာအပြည့်အ၀ ဆုတ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်သည့်အတွက် ခြေစွမ်းကောင်းကောင်းပြလို့ရပါသေးသည်။ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းမျက်နှာထောက်စရာမလိုတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အစိုးရဦးဆောင်ပါတီကလက်ကျန် (၈)လအတွင်းဒီမိုကရေစီ၊ ဖက်ဒရယ်အရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးတို့ကိုအမှန်တကယ် ဦးထိပ်ထားကြောင်းပြသသည့်အနေဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးချယ်မှုစနစ်အပါဝအင် အခြားဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဆက်တိုက် ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြလိုပါသည်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဟုအိမ်တော်ကြီးသုံးရပ်ရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ပြည်သူ့နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးသာဖြစ်ပြီးသီးခြားလွှတ်တော်(ကိုယ်စားလှယ်)လည်းမရှိသောကြောင့် သီးခြားလွှတ်တော်(House)အဖြစ် မသတ်မှတ်ပေ။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအတုယူထားသည့် အဆိုပါလွှတ်တော်များသည် သာမန်အားဖြင့် မတူညီသောရည်ရွယ်ချက်နှင့် သဘောသဘာဝကို အခြေခံထားပါသည်။ ယင်းကို၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတွင် အတိအကျ အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိသော်လည်းပုဒ်မတစ်ခုချင်းစီတွင် သုံးနှုန်းထားသည့် စကားရပ်များကအရအတန်အသင့် နားလည်နိုင်ပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် ပုဒ်မ(၁၀၉)(က)အရ ‘မြို့နယ်’နှင့် ‘လူဦးရေ’ကိုအခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့နယ်သည်ပြင်လျှင် ပထ၀ီဝင်နှင့် လူဦးရေကိုအခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် လူဦးရေကိုအဓိကအခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းသည်ဟုနားလည်ရသည်။ နိုင်ငံတကာတွင်လည်းအောက်လွှတ်တော်သည် အလားတူဖြစ်ပါသည်။
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပုဒ်မ(၁၆၁)(က)အရ မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လျှင် နှစ်ဦးကျစီဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါသည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကိုလျှော့ချသည့်အနေဖြင့် မြို့နယ်နှင့်ကျေးရွာအဆင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တည်ဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုနားလည်ရပါသည်။ ၎င်း၏ ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာ(ဇယား-၂)သည်လည်းစည်ပင်သာယာရေး၊ ယစ်မျိုး၊ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း အပါအ၀င် အသေးစားလုပ်ငန်းများ၊့ အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများစသည့်မြို့ရွာ/ရပ်ကျေးသို့မဟုတ် ဒေသန္တရာအဆင့်လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်သည် ပုဒ်မ(၁၄၁)(က)အရ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး (constituent/sub-national units)ကိုအခြေခံ၍ အညီအမျှဖြင့် ဖွဲ့စည်းစေလွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူဦးရေနှင့်မြို့နယ်/ခရိုင်စုဖွဲ့မှုတို့ကိုထည့်တွက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ပြည်ထောင်စုကြီး၏ ဒုတိယအလွှာ(second tier)အုပ်စုများအကြားတန်းတူညီမျှရေးဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်အမည်ကို ‘အမျိုးသား’ဟုသုံးနှုန်းပါသည် (‘ပြည်သူ/ပြည်သူ့’ ဆိုသည့် စကားလုံးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ)။ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေတွင် ၎င်းကို‘လူမျိုးစု’လွှတ်တော်ဟုသုံးနှုန်းခဲ့သည်။ လူမျိုးများစုရပ်(လွှတ်တော်)ကိုဆိုလိုသည့် သဘောဖြစ်တန်ရာ၏။ ထိုစကားရပ်(၂)ခုစလုံးသည် အနက်အဓိပ္ပယ်အတူတူဖြစ်ပြီး ‘အမျိုးသား၊ လူမျိုး၊ သို့တည်းမဟုတ် တိုင်းရင်းသား’ ဖြစ်တည်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကြားအမျိုးသားများတန်းတူရေး(nationals equality)နှင့် အင်အားချိန်ခွန်လျှာညှိနိုင်ရေးကိုရည်ညွန်းကြောင်းထင်ရှားပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ၏အနှစ်သာရသည် ကိုယ်စားပြုမှု(representation)ကိုအခြေခံသည်နှင့်အညီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် အထက်တွင် ဖော်ပြသကဲ့သို့ တိုင်းပြည်မှာရှိသော ပြည်သူအများစုကိုကိုယ်စားပြုသည့် အဆောက်အဦးဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်သူအများစု၏ အသံကိုထင်ဟပ်ပေးသည့် စင်မြင့်ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည်မြို့နယ်တစ်ခု၏ ထက်ဝက်ကို ကိုယ်စားပြုစေလွှတ်သည့်အတွက်ဒေသန္တာရသို့မဟုတ် မြို့ရွာနှင့်ရပ်ကျေးရေးရာစင်မြင့်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများကဦးရေတူညီစွာကိုယ်စားပြုစေလွှတ်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်သည် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက် အုပ်ချုပ်ရေးနယ်နိမိတ်အရသော်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင်းပင်လုံစာချုပ်နှင့်အတူ ပြည်နယ်စုဖွဲ့မှုအရသော်လည်းကောင်း၊ ပထ၀ီဝင်နှင့် လူဦးရေအချိုးအစားအခြေခံခြင်းမဟုတ်ဘဲတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစုစည်းနေထိုင်မှုကိုအဓိကအခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုအချက်ကိုထောက်ရှုလျှင်ပြင်အမျိုးသားလွှတ်တော်သည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစုဖွဲ့မှုကိုအဓိကကိုယ်စားပြုကြောင်းထင်ရှားပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မြို့ရွာအတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအပိုင်းတွင်အားထားရမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ အဓိကကျောရိုး ဖြစ်သည်နှင့်အညီတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်ရေး၊ အခွန်ဘဏ္ဍာ၊ ရင်းနှီးမြှောက်ခံမှု၊ တရားဥပဒေဆိုးမိုးရေးနှင့် မြို့နယ်အလိုက်အစိုးရယန္တရားလည်ပတ်မှုတွင် ထိရောက်မှုရှိရေးနှင့် မျှတမှုရှိရေးတို့၏ အဓိကအိမ်စာဖြစ်ပေမည်။ ထိုနည်းတူစွာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားအလှယ်များအနေဖြင့် လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားများအချင်းချင်းကြားအမျိုးသားတန်းတူရေးတရားမျှတရေး၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ အခြေခံဥပဒေအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးစသည်များကိုအထူးအာရုံစိုက်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဥပဒေပုဒ်မ(၄)အရ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီး၏ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေ (constituency)များကိုအဓိကအားဖြင့် မြို့နယ်/ခရိုင်ကိုအခြေခံထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။လူဦးရေကိုလည်းတစ်ချို့နေရာတွင် ထည့်တွက်ထားပါသည်။ ဤအချက်ကိုအဓိကထောက်ပြလိုပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်ဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်ကို မြို့နယ်/ခရိုင် အခြေခံသတ်မှတ်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်များသည် မူလရည်ရွယ်ချက်နှင့် အနှစ်သာရ ဖြစ်သော ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ကိုယ်စားပြုမှုကိုသွယ်ဖီပြီးမိမိကိုမဲပေးသည့် သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်(မြို့နယ်/ခရိုင်မျာ)အဆင့်ကိုသာတွေးခေါ်စိတ်ဝင်စားလာစေတော့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုသည် တစ်မျိုးသားလုံးအရေးနှင့် ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာတို့ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ မြို့နယ်နှင့် ခရိုင်အဆင့်၏ ရေ၊ မီး၊ လမ်းတံတားအရေးကိုသာအာရုံစိုက်နေခြင်းသည် ၎င်းမဲဆန္ဒနယ် ဘောင်ကျုံ့မှုနှင့် တစုံတရာဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ တကယ်လည်းမိမိကိုရွေးချယ်သည့် ပြည်သူ(သို့မဟုတ်) မဲဆန္ဒနယ်ကိုသာအဓိကကိုယ်စားပြုတာဝန်ခံခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေး(electoral politics)၏ သဘောသဘာဝ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လက်ရှိမဲဆန္ဒနယ်မြေသတ်မှတ်မှုကြောင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်နှင့် အနှစ်သာရပေါ့ပျက်သွားသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
မြို့နယ်အခြေခံဖြင့် ကိုယ်စားပြုစေလွှတ်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရှိနေပြီဖြစ်သည့်အတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေကို ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးဖြင့်သတ်မှတ်သင့်သည်။ဤနည်းဖြင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဝင်ပြိုင်သည့် နိုင်ငံရေးသမားများသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် တစ်ပြည်နယ်လုံးနှင့် တစ်မျိုးသားလုံးအကျိုးစီးပွားများကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှာဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသများကိုမူလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတစ်နေရာစီသီးခြားသတ်မှတ်ပြီးကျန်မဲဆန္ဒနယ်မြေအားလုံးကိုပြည်နယ်/တိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးတွင် မဲဆန္ဒနယ်မြေတစ်ခုတည်းပုံစံဖြင့် သတ်မှတိနိုင်ပါသည်။ မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ(၃၉၉)(ဂ)အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာအာဏာအပြည့်အ၀ရှိသည့်အတွက် ခြေဥပြင်စရာမလိုအပ်ပေ။
ထိုသို့ မဲဆန္ဒနယ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါကရွေးကောက်ပွဲစနစ်လည်းလက်ရှိ နိုင်သူအကုန်ယူ(First-Past-The-Post)စနစ်အစားအခြားစနစ်တစ်ခုခုပြောင်းလဲကျင့်သုံးရပါမည်။ တကယ်လည်းFPTPစနစ်သည် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည် ဆိုသော်ငြားလည်းကိုယ်စားပြုမှုအပိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုအပိုင်းတွင် ကန့်သတ်မှုများရှိသည့်အတွက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ (၆၀)ခန့်ကသာကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီးနိုင်ငံအများစုကအချိုးကျကိုယ်စားပြု(Proportional Representation)စနစ် သို့မဟုတ် အခြားစနစ်တစ်ခုခုကိုကျင့်သုံးရွေးချယ်ကြပါသည်။
မိမိအနေဖြင့်Single Transferable Vote (STV) ခေါ် တစ်ဦးချင်းမဲလွှဲပြောင်းနိုင်သောရွေးကောက်ပွဲစနစ် ကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ကျင့်သုံးရန် အဆိုပြုပါသည်။ ဤစနစ်သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ရတိုင်းနှင့် ဒေသရှိသော ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများအတွက်ပြင်လျှင် ကျင့်သုံးရန် အခက်အခဲမရှိပေ။ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့် ဒေသများအတွက် တစ်နေရာစီကိုလက်ရှိ(FPTP)အတိုင်းကျင့်သုံးစေလျက်ကျန်နေရာ (ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ၇ နေရာနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၁၁နေရာရှိ)ကိုဖော်ပြပါ STV စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါစနစ်အရအမျိုးသားလွှတ်တော် ၁၂ဦးခွဲတမ်းကို မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုတည်းအဖြစ်ဖြင့် သတ်မှတ်လျက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပစေရမည်။ ၎င်းကိုကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးထက် ပိုရွေးချယ်သောမဲဆန္ဒနယ် (multi-member district)ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းမဲဆန္ဒနယ်မြေအတွင်းပါတီအသီးသီးမှ ၀င်ပြိုင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုမဲပြားပေါ်တွင် (၁)(၂)(၃)(၄)စသည်ဖြင့်ဦးစားပေးသို့မဟုတ်အစဉ်လိုက်(preference) အဆင့်သတ်မှတ်ပေးရမည်။ သို့တည်းမဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး PR စနစ်ထဲကအခြားသင့်တော်သည့်မိုဒဲလ်များကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် လက်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေ(constituency) သတ်မှတ်မှုကိုအဓိကမီးမောင်းထိုးဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ရွေးချယ်မှုစနစ်(PR)အပိုင်းကို အကျယ်တ၀င့် မဆွေးနွေးတော့ပါ။
လူဦးရေအရအကြီးအကျယ် ရောနှောခြင်းခံရသောရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်ပီအာရ်စနစ်ကိုတိုင်းရင်းသားပါတီအချို့က အစာမကျေဖြစ်သည်ကိုလည်းသတိချက်ရပါမည်။ယင်းကို“သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင်ဓားမဦးချ နေထိုင်သောဗမာအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားများကသာလျှင် မဲပေးခွင့်ရှိသည်”ဟုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းဖြင့် ၎င်းစိုးရိမ်မှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါသည် (ဓားမဦးချဟုဆိုရာတွင် လွတ်လပ်ရေးမတိုင်ခင်နေထိုင်မှုကိုဆိုလိုသည်)။ ထိုအတွက် အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ(၃၉၁)(ခ)နှင့် ညှိစွန်းသည်ဟုဆိုနိုင်သလိုပိတ်ပြင်ထားခြင်းမရှိဟုလည်းယူဆနိုင်ပါသည်၊ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးအပေါ်မှာမူတည်ပါသည်။ မည်သို့ပြင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများမဲပေးမှုကိုပိတ်ပြင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေပုဒ်မ(၁၀)အရ ‘မဲဆန္ဒနယ်တစ်နေရာရာတွင် ရက်ပေါင်း(၉၀)နေထိုင် ရုံဖြင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုရက်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
ခြုံငုံကြည့်လျှင် အမျိုးသားလွှတ်တ်ာသည် အခြားလွှတ်တော်များနှင့် မတူဘဲလူမျိုးနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများစုဖွဲ့မှုများအကြားတန်တူရေးအခြေခံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူဦးရေနှင့်ပထ၀ီဝင်ကိုအခြေခံသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဲ့သို့ မြို့နယ်/ခရိုင်ကိုယ်စားပြုဖြင့် မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်ခြင်းသည် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုမှေးမှိန်ရာရောက်သွားစေပါသည်။ အထက်လွှတ်တော်၏ စုဖွဲ့မှုသဘာဝသည် ထူးခြားမှုရှိသည့်အလျောက် လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
SalaiCeu Bik Thawng
Lawmhpi Cio Uhsih: Australia Um Salai Sang Peng Lian Nih Youth Work In Degree A Kan Lak Piak
A Dik Bak:Saw David Lah An Tuahto Nak Nih Hmuhsak Mi Krifa Le Krih Muisam.